CD Taxanaha extruder hal fur
CTS-C Taxanaha Twin Ku marooji Extruder
Taxanaha CTS-D High Torque Twin Screw Extruder
CTS-H Taxanaha Twin Ku marooji Extruder
Lab shaybaarka extruder
Khadka wax soo saarka pelletizing biyaha hoostiisa
PVB khadka wax soo saarka filimka dhexe
Khadka wax -soo -saarka Devolatilization
Laba heer extruder
Foosto qolof Clam mataano extruder
Mashiinno kaabayaal ah
CD Taxanaha Single Ku marooji extruder inta badan khuseeya extrude PP, PE, PETPVC, ABS, PS, PA iwm qalabka.
1.Waxay qaadataa sanduuqa qalabka gaarka ah, waxayna leedahay astaamo buuq yar, orod deggan, awood qaadis sare, nolol adeeg dheer. Lagu qalabeeyay caaryo kala duwan iyo qalab kaabayaal ah. Waxay soo saari kartaa tuubo caag ah, xaashi, loox, dhagxaan iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay astaamo geedi socod fudud, wax soo saar sare, cadaadis fidsan oo deggan, iyo qiime jaban. Qalabku wuxuu u dhexeeyaa matoorada iyo sanduuqyada qalabka, kaas oo ka dhigaya mashiinka mid aad u cufan oo hoos u dhiga isticmaalka tamarta.
Dekedda qiiqa 2.Vacuum waxaa la siiyaa foostada, naqshadeynta qiiqa qiiqa, marka la barbardhigo bakhtiiyaha caadiga ah, shaqada qiiqa iyo dheef -shiidka ayaa la kordhiyaa.
3.Xirfadda iyo goobta codsiga ee hal boorso ayaa la ballaariyay.
4.Barrel wuxuu ku qaboojin karaa marawaxad ama ku wareejin karaa biyo jilicsan, nidaamka xakamaynta heerkulka la soo dejiyey, PID-ga is-hagaajinta shaqada, heerkul joogto ah oo sax ah. Xawaare sare oo rogaal -celis ah, qaab -dhismeed hal -ku -dhejiye ah ayaa si guul leh loo horumariyey, kaas oo siinaya hal fur -fur oo leh meel qiima badan.
Nooca Dhexroor L/D RPM (ugu badnaan) Awood Soo saar (kg/saac)
Extruder screw kaliya waa aalad awood dhimis oo gaar ah oo loogu talagalay balaastigga iyo caag qalabka fidinta hal fur. Hoos -u -dejiyaha iyo mootada waa la isku lammaan. Qaybaha kaarku waxay ka samaysan yihiin birta daawaha ee xoogga badan. Gear-ka waxaa lagu farsameeyaa carburizing, deminta iyo geedi socodka shiididda ilkaha oo sax ah.
Extruder screw kaliya waa ku fudud yahay naqshadeynta qiimahiisuna waa raqiis, sidaa darteed aad baa loo isticmaalaa.
(1) Maaddada gudbinta hal -bakhtiiyaha hal -ku -xiridda inta badan waxay kuxirantahay khilaaf, sidaa darteed wax -qabadkeeda quudinta ayaa xaddidan, boodhka, dhejiska, fiber galaaska iyo buuxinta aan dabiici ahayn way adag tahay in lagu daro.
(2) Marka cadaadiska sanku uu sarreeyo, kororka ka -hortagga ayaa kordha, si wax -soo -saarku u yaraado.
(3) Maaddada soo -saaraha hal -dabooliyaha hal -ku -haynta ayaa leh saamayn yar oo cusbooneysiin ah dusha aagga qiiqa, sidaa darteed saamaynta qiiqa ayaa liidata.
(4) Extruder fur -keli ah kuma haboona geeddi -socodka qaarkood, sida midabaynta polymer -ka, ka -shaqaynta budada kulaylka, iwm.
Hore: Mashiinno kaabayaal ah
Xiga: Foostada Clam Shell Co-rotating Twin Screw Extruder
Biodegradable Twin Ku marooji Extruder
Extruder Double Ku marooji
Extruder caaga ah
Extruder caaga Waayo Lab
Single Ku marooji Extruder
NO.227 Wadada Zhening East, Degmada Lishui, Gobolka Nanjing ee Gobolka Jiangsu